JONO: Hohatsaraina ny fidiram-bolan’ny mpanjono
Lynda ANDRIATSITONTA mahajanga, ministeran’ny harena anaty rano sy ny jono	0 Commentaire fév 28, 2018
Nitazona ny laharana fahatelo amin’ny fanondranana vokatra any amin’ny tsena iraisam-pirenena ny jono eto Madagasikara. 7 % ny harin-karena faobe nampidirin’ity sehatra ity tamin’ny taona 2017. Raha tarehimarika voaray, mponina mahery ny 500.000 no manankim-pivelomana amin’ity sehatra ity. Niakatra 26 % ny vokatra azon’ny ny mpanjono nentim-paharazana na mpanjono madinika izany nahazoan’izy ireo loharanom-bola 29 000 ariary isan’andro ny taona 2017.
Notanterahina any Mahajanga nanomboka omaly 26 febroary ary hifarana ny 28 febroary 2018 ny fivoriana fanaon’ny fianakaviam-ben’ny ministeran’ny harena anaty rano sy ny jono isan-taona. Miompana amin’ny fanatsarana ny fidiram-bolan’ny mpanjono eto Madagasikara ny fivoriana. Solotenan’ny mpiasa avy amin’ny faritra 22 miisa 240, miaraka amin’ireo rafi-pitantanana miankina amin’ny ministera. Manatrika io fikaonan-doha io ihany koa ireo mpiara-miombona antoka amin’ny ministera toy ny tomponandraikitry ny tetikasa “SWIOR FISH 2” izay vatsian’ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena Alemana amin’ny alalan’ny GIZ.
‹ SALON DES ETUDES INTERNATIONALES : « Un rendez-vous incontournable »	› ISGIE MADAGASCAR: Hanoro-lalana ny mpianatra momba ny asa